FARSAMADA + DHAQAALAHA
DAABAC + XIRIIRKA
BOOK DHAHANKA + Xusuusin buugaag
SHAQO + URUR
BU (Ganacsi Midaysan)
BU waa ganacsi Kanadiyaan ah oo bixiya noocyo kala duwan oo naqshad farshaxan / adeegyo farshaxan ah oo ku saabsan daabacaadda, baakadaha, xiritaanka buugaagta, daabacaadda badeecadaha + dharka, astaamaha gaarka ah iyo kaararka ganacsiga, dhacdooyinka dhijitaalka ah ee daabacan, waraaqo dhejisyo ah, waraaqaha waraaqaha , soo degsashada dhijitaalka ah ee darbiga taleefanka iyo wixii intaa ka badan. Maaddaama tani ay tahay ganacsi Kanadiyaan ah, wax soo saarka iyo adeegyada waxaa loo iibin karaa oo keliya dadka ku nool dalka gudihiisa.
Shirkadan waxaa helay Lashaiya "Shai" Coleman bishii Oktoobar ee 2019 welina lama helin. Shucuur dartii iyo jaceylka uu u qabo naqshadeynta garaafka iyo Maareynta Isgaarsiinta Sawirka, waxay go'aansatay inay ku saleyso meheraddeeda hamigeeda! Sidan ayey ku ogaatay meheraddeeda oo ay usii waday dadaal si ay uga caawiso riyadeeda ganacsi inay u rumowdo.
BU waxay bixisaa noocyo kala duwan oo naqshad farshaxan / adeegyo farshaxan ah oo ku saabsan daabacaadda, baakadaha, buugaagta la daabaco, daabacaadda badeecadaha + dharka, astaamaha gaarka ah iyo kaararka ganacsiga, dhacdooyinka dhijitaalka ah ee daabacan, waraaqaha, istiikarada, waraaqda xarkaha jireed, dijitaalka dijital ah ee taleefanka wallpaper iyo inbadan. Shirkadda in takhasusay siinta macaamiisha kala duwan ee wax soo saarka iyo adeegyada gaarka ah. Macno malahan haddii macaamiisha ay u baahan yihiin alaabooyin loogu talagalay ganacsiyadooda, iskuul, shaqo, ama mashruuc kasta, BU waxay leedahay wax kasta oo ay ugu baahan yihiin inay si kalsooni leh shaqadooda ku qabsadaan oo ay abaabulaan. Alaabooyinka iyo adeegyadu waxay u dhexeeyaan joogsi loogu talagalay ilaa baakadaha loogu talagalay ganacsiyada kale, ilaa adeegyo kale oo qaabeynta iyo daabacaadda ah.
Aragtida shirkadda ee 'BU' waa inay dadka oo dhan siiso shaqsiyad gaar ah oo taagan, qalab shaqo iyo waxyaabo kale si ay uga faa'iideystaan ​​khibradooda shaqo ama mashaariicda si wanaagsan oo hal-abuur leh. Ganacsigeyga, waxaan rabaa in aan ku dhaqan geliyo isbedel togan iyadoon loo eegin haddii ay yihiin alaabteyda, adeegyadeyda la bixiyo, ama tallaabooyinka taageerada ah. BU waxay hirgelisaa waxtarka iyada oo loo marayo farriinta ka dambeysa magaca iyo iyada oo loo marayo alaabooyinka iyo adeegyada la bixiyo. Xigasyo togan ayaa laga heli karaa badeecooyinka badankood, ha ahaato buugaagta wax lagu qoro, istiikarada, ajandayaasha, qorsheeyeyaasha ama kalandarka. Tani waa wax ka caawin doonta dhiirigelinta macaamiisha inay sameeyaan waxa ugu fiican oo ay ku dadaalaan waxa ay qabanayaan, si ay uga caawiyaan inay ka gudbaan dhibaatooyinka iyo guulaha ay gaaraan ganacsi, inay ka caawiyaan milkiileyaasha aan ganacsiga ahayn inay nolol maalmeedkooda ka gudbaan iyagoo og inay sameyn karaan. wax kasta oo suurtagal ah iyo in ay caadi tahay in la muujiyo, okay in ay iyagu is ahaadaan. Iyadoo la siinayo booskan hal abuurka ah ee loogu talagalay macaamiisha inay qaabeeyaan oo ay shakhsiyeeyaan wax soo saarkooda dookhooda waxay u oggolaaneysaa iyaga inay ku dhiirrigeliyaan damacyadooda, taas oo keentay inay abuuraan wax run ahaantii ku hadla runtooda oo naftooda muujiya. Tani waa sababta halkudhiggu u leeyahay, "Hal abuur samee, dhiirrigeli, adigu noqo." BU waxay u taagan tahay 'Ganacsiga Midaysan', oo macnaheedu yahay in dhammaan ganacsiyada, yar iyo weyn, iyo dhammaan dadka u baahan wax soo saarka iyo adeegyada la bixiyo, dhammaantood ay isugu imaan karaan hal meel si ay riyadoodii ganacsi uga dhabeeyaan, iyo inay la yimaadaan hal-abuurkooda nolosha. Wax la mid ah ayaa loogu talagalay kuwa ka faa'iideysan kara adeegyada kale ee la bixiyo, in kasta oo bartilmaameedyada ugu weyn ee la bartilmaameedsanayaa ay yihiin milkiilayaasha ganacsiga / ganacsatada. BU waxay ujeedadeedu tahay inay meel dhigto raadadka deegaanka ee naqshadeynta garaafka, daabacaadda, baakadaha, iyo warshadaha wax qabanaya. Wax yar oo wasakh ah lama soo saari doono, tamar yar ayaa loo isticmaali doonaa, alaabooyin aan waxyeello lahayn iyo kiimikooyin ayaa loo isticmaali doonaa, mashiinno tamarta ku shaqeeya iyo nalalka ayaa sidoo kale loo isticmaali doonaa, 100% qalabka loo isticmaalo in lagu sameeyo alaabooyinka waxaa laga samayn doonaa walxaha dib loo warshadeeyay, agabku wuxuu noqon doonaa mid la baabi'in karo, dhammaan qalabka dib loo warshadeeyayna waxay noqon doonaan kuwo vegan si loo hubiyo in badeecad kasta aan laga sameynin wax ka mid ah qashinka xoolaha ama waxyaabaha ay ka kooban yihiin. Tani waxay yareynaysaa heerka waxyeellada xoolaha.
Ka caawi inaad taageerto BU adoo iibsanaya qaar ka mid ah farshaxankeeda cajiibka ah! Runtii macno weyn ayey u lahaan lahayd iyada waxayna ka caawin doontaa ganacsigeedu inuu kobco. Taageeradaada aad baa loo mahadiyey. Waad ku mahadsan tahay booqashada BU, oo xusuuso inaad had iyo jeer adiga noqoto!
Rarista & Soo Celinta
Facebook: Ganacsi Midaysan
Sabti: 10-ka - 8-da dambe
Axad: 10am - 7pm
Ku qor emaylkaaga halkan
Waad ku mahadsan tahay soo gudbinta!
© 2021 BU Si sharaf leh ayaa loogu abuuray Wix.com